Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » NASA teknolojia aviation mba hitsitsiana fotoana ho an'ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Nafindra tany amin'ny Federal Aviation Administration ny Demonstration 2 an'ny Airspace Technology an'ny NASA
Teknolojia fandrindrana sidina fiaramanidina novolavolain'ny NASA izay hanatsara tsy ho ela ny fiankinan'ny mpandeha.
Nitsidika ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Orlando any Florida ny Administrator NASA Bill Nelson ary nihaona tamin'ireo mpitarika ny fiaramanidina mba hiresaka momba ny fampiharana ny teknolojia fandrindrana sidina fiaramanidina novolavolain'ny masoivoho izay hanatsara tsy ho ela ny fiankinan'ny mpandeha - izay zava-dehibe indrindra mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra toy ny fialantsasatry ny Thanksgiving.
Tamin'ny Septambra, ny teknolojia izay notsapaina nandritra ny NASANy Airspace Technology Demonstration 2 (ATD-2) dia nafindra tany amin'ny Fitondrana federaly federaly (FAA). Ny seranam-piaramanidina lehibe manerana ny firenena - anisan'izany ny Orlando International - dia hampihatra ny teknolojia tsy ho ela. Nelson dia niresaka momba ny famindrana teknolojia niaraka tamin'ny Tale Jeneralin'ny Greater Orlando Aviation Authority Phil Brown.
"NASAny fiaraha-miasa amin'ny faa dia manatitra tsy tapaka ho an'ny vahoaka amerikana, manatsara ny fahombiazan'ny indostrian'ny fiaramanidina ara-barotra ho an'ny tontolo iainana sy ny mpandeha manerana ny firenena," hoy i Nelson. "Ny teknolojia fandrindrana ny sidina, izay ahafahan'ny mpiasa mandrindra tsara kokoa ny fihetsiky ny fiaramanidina rehefa eny amin'ny seranam-piaramanidina izy ireo, dia tsy ho ela dia hanampy amin'ny fiantohana ny mpandeha maro kokoa hivoaka ny tany sy hody amin'ny fialantsasatra haingana sy mahomby kokoa noho ny teo aloha. ”
NASA ary ny faa nahavita efa ho efa-taona ny fikarohana sy ny fitiliana ny asa eny ambonin'ny tany amin'ny fanaovana kajy ny tohin'ny vavahady amin'ny alalan'ny fandrefesana ara-potoana any amin'ny seranam-piaramanidina be atao, mba hahafahan'ny fiaramanidina mihodinkodina mivantana any amin'ny lalamby hiaingana sy hialana amin'ny fotoanan'ny fiarakaretsaka sy ny fitazonana tafahoatra, ny fampihenana ny fampiasana solika, ny entona, ary ny fahataran'ny mpandeha.
“Rehefa mampiasa ity rindrambaiko ity izahay, dia mihatsara kokoa ny traikefa amin'ny dia ho an'ny mpandeha mandritra ny fotoana rehetra mihena ny etona amin'ny fiaramanidina. Fandresena izany”, hoy izy faa Mpitantana Steve Dickson. "Ny NASA dia mijanona ho mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ny ezaka ataon'ny FAA amin'ny fananganana rafitra fiaramanidina maharitra."
Ny FAA dia mikasa ny hametraka ny teknolojian'ny fandrefesana ambonin'ny NASA amin'ny voalohany amin'ny seranam-piaramanidina 27, anisan'izany ny Orlando International, ho ampahany amin'ny fampiasam-bola lehibe kokoa amin'ny teknolojia fitantanana ny eny amin'ny seranam-piaramanidina antsoina hoe programa Terminal Flight Data Manager (TFDM). Mitsitsy solika, mampihena ny entona, ary manome flexibilité kokoa ny zotram-piaramanidina sy ny mpandeha amin'ny fotoana alohan'ny hivoahan'ny vavahady.
"Ny fandefasana TFDM andrasana amin'ny taona 2023 dia mifanaraka amin'ny vinavinay hiverina amin'ny fifamoivoizana mpandeha alohan'ny areti-mifindra amin'io taona io ihany," hoy i Brown. "Ireo fanavaozana ireo dia tokony hiteraka traikefa malefaka kokoa ho an'ny besinimaro ary hanatsara ny 'The Orlando Experience' izay ezahinay atolotra isan'andro ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena."
Ny ekipan'ny ATD-2 an'ny NASA dia nanandrana voalohany ny teknolojian'ny fandaharam-potoanan'ny fiaramanidina tamin'ireo mpampiasa eran-tany tamin'ny Septambra 2017 tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Charlotte-Douglas. Tamin'ny Septambra 2021, ny fitaovana Integrated arrival and departure system (IADS) dia namonjy solika maherin'ny 1 tapitrisa galona fiaramanidina. Ireo fitsitsiana ireo dia azo natao tamin'ny fampihenana ny fotoana fiasan'ny motera jet, izay mampihena ihany koa ny vidin'ny fikojakojana ary namonjy ny zotram-piaramanidina manodidina ny $1.4 tapitrisa eo ho eo amin'ny vidin'ny mpiasan'ny sidina. Amin'ny ankapobeny, voatsimbina 933 ora ny mpandeha tamin'ny fahataran'ny sidina ary nitsitsy 4.5 tapitrisa dolara teo ho eo ny sandan'ny fotoana.